समाचार - कसरी सुरक्षा दोहन प्रयोग गर्ने
किन सुरक्षा दोहोर्‍याउने सही प्रयोग गर्नुहोस्
(१) किन सुरक्षा दोहन
सुरक्षा दोहनले प्रभावकारी रूपमा दुर्घटनाको घटनामा पतनको कारणले मानव शरीरलाई ठूलो क्षतिबाट बच्न सक्छ। उचाइबाट गिरावट हुने दुर्घटनाहरूको तथ्या analysis्कगत विश्लेषणका अनुसार m मीटरभन्दा माथि उचाइबाट झर्ने दुर्घटनाहरू २०% र5मिटर मुनि ती खाताहरू करीव 80०% हुन्छन्। पहिले प्रायः घातक दुर्घटनाहरू हुन्, यस्तो लाग्छ कि २०% मात्र डाटाको सानो भागको लागि जिम्मेवार छ, तर एक पटक यो भयो भने, यसले जीवनको १००% लिन सक्दछ।
अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि जब खस्ने मानिस गल्तिले भुँइमा खस्छन्, ती मध्ये धेरैजसो सुपिन वा प्रवण स्थितिमा अवतरण गर्छन्। उही समयमा, अधिकतम प्रभाव बल जुन कुनै व्यक्तिको पेट (कम्मर) ले सामना गर्न सक्छ सम्पूर्ण शरीरको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा ठूलो हुन्छ। यो सुरक्षा दोहन को उपयोग को लागी एक महत्वपूर्ण आधार भएको छ।
(२) किन सुरक्षा दोहोर्‍याउने सही प्रयोग
जब एक दुर्घटना हुन्छ, गिरावट एक विशाल तलको बल उत्पादन गर्दछ। यो बल अक्सर एक व्यक्तिको वजन भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। यदि फास्टनिंग पोइन्ट पर्याप्त मजबूत छैन भने, यो पतन रोक्न सक्षम हुनेछ।
धेरै पतन दुर्घटनाहरू अचानक दुर्घटनाहरू हुन्, र त्यहाँ स्थापनाकर्ताहरू र अभिभावकहरूको लागि अधिक उपायहरू लिने समय हुँदैन।
यदि सुरक्षा दोहन गलत तरिकाले प्रयोग गरियो भने, सुरक्षा दोहनको भूमिका शून्यको बराबर छ।
फोटो: आइटम नम्बर। YR-QS017A
कसरी उचाइमा सही कामको लागि सुरक्षा दोहन प्रयोग गर्ने?
१.हाइट सुरक्षा सावधानी उपकरणमा आधारभूत काम गर्दै
(१) दुई १०-मिटर लामो सुरक्षा डोरी
(२) सुरक्षा दोहन
()) डोरी स्ट्र्यापि।
()) एक सुरक्षात्मक र उठाने डोरी
२. सुरक्षा डोरीहरूको लागि सामान्य र सही फास्टनिंग पोइन्टहरू
सुरक्षा डोरीलाई दृढ स्थानमा बाँध्नुहोस् र अर्को छेउमा काम गर्ने सतहमा राख्नुहोस्।
सामान्यतया फास्टनिंग पोइन्टहरू र फास्टनिंग विधिहरू:
(१) कोरिडोरमा फायर हाइड्रन्टहरू। फास्टनिंग विधि: आगो हाइड्रन्टको वरिपरि सुरक्षा डोरी दिनुहोस् र यसलाई जोड्नुहोस्।
(२) कोरीडोरको ह्यान्ड्राईलमा। फास्टनिंग विधि: पहिलो, हेन्ड्रेल कडा र कडा छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्, दोस्रो, ह्यान्ड्रेलको दुई बिन्दुको वरिपरि लामो डोरीलाई पास गर्नुहोस्, र अन्तमा लामो डोरीलाई दृढ छ कि छैन भनेर जाँच्नुहोस्।
()) जब माथिका दुई सर्तहरू पूरा हुँदैनन्, तब लामो डोरीको एक छेउमा भारी वस्तु राख्नुहोस् र यसलाई ग्राहकको चोरी विरोधी ढोका बाहिर राख्नुहोस्। उही समयमा, एन्टी चोरी चोरी ढोका लक गर्नुहोस् र ग्राहकलाई सुरक्षा नोक्सानी रोक्न एंटी-चोरी ढोका नखानू भनेर सम्झाउनुहोस्। (नोट: एन्टी-चोरी ढोका ग्राहकले खोल्न सक्छ, र यो सामान्यतया प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन)।
()) जब ग्राहकको घरबाट बारम्बार प्रविष्टि र बाहिर निस्कीएको कारण एन्टि-चोरी ढोका लक गर्न सकिदैन, तर एन्टी-चोरी ढोकासँग डबल पक्षीय ह्यान्डल हुन्छ, यो चोरी-विरोधी ढोका ह्याण्डलमा बोल्ट गर्न सकिन्छ। फास्टनिंग विधि: लामो डोरी दुबै छेउमा ह्याण्डलको वरिपरि लूप गर्न सकिन्छ र दृढसँग जोड्न सकिन्छ।
()) ढोका र विन्डो बीचको पर्खाल बकल शरीरको रूपमा चयन गर्न सकिन्छ।
()) अन्य कोठामा ठूला काठको फर्निचर पनि बोकल चयनको वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यो ध्यान राख्नु पर्छ कि: यस कोठामा फर्निचर छनौट नगर्नुहोस्, र विन्डो मार्फत सिधा जडान नगर्नुहोस्।
()) अन्य फास्टनिंग पोइन्टहरू, आदि। मुख्य बुँदाहरू: बकल पोइन्ट नजिकको सट्टामा टाढा हुनुपर्दछ, र अपेक्षाकृत कडा वस्तुहरू जस्तै फायर हाइड्रन्ट्स, कोरिडोर ह्यान्ड्रेल्स, र चोरी-विरोधी ढोका पहिलो विकल्प हुन्।
Safety. सुरक्षा कवच लगाउन कसरी
(१) सुरक्षा दोहोरो राम्रो फिटिंग छ
(२) सही बकसुआ बीमा बकसुआ
()) सुरक्षा डोरीको बकसुआलाई सुरक्षा बेल्टको पछाडि सर्कलमा बाँध्नुहोस्। बोकललाई जाम गर्न सुरक्षा डोरी बाँध्नुहोस्।
()) अभिभावकले आफ्नो हातमा सुरक्षा दोहोर्याउनको बोकल पुल तान्छ र बाहिरी कामदारहरूको कामको सुपरिवेक्षण गर्दछ।
Safety. सुरक्षा डोरीहरू र सुरक्षा दोहोर्‍याउने प्रतिबन्धको लागि ठाउँहरू र विधिहरू
(१) हातले खिचेको विधि। अभिभावकलाई सुरक्षा कवच र सुरक्षा बेल्टको बकल पोइन्टको रूपमा हात-हात विधि प्रयोग गर्नका लागि कडा निषेध गरिएको छ।
(२) मानिसहरूलाई बाँध्ने तरिका। उचाईमा एयर कन्डिसनको लागि सुरक्षा विधिको रूपमा मानिसहरूलाई टेदर गर्ने विधि प्रयोग गर्न कडाइका साथ प्रतिबन्धित छ।
()) वातानुकूलित कोष्ठक र अस्थिर र सजिलै विकृत वस्तुहरू। बाहिरी वातानुकूलन कोष्ठक र अस्थिर र सजिलै विकृत वस्तुहरू सीट बेल्टको बन्धकको रूपमा प्रयोग गर्न कडाइका साथ प्रतिबन्धित छ।
()) धारदार किनारहरू र कुनाहरू सहित वस्तुहरू। सुरक्षा डोरीलाई लगाउन र भाँचिनबाट जोगाउन, सुरक्षा धारणा र सुरक्षा बेल्टको बोकल पोइन्टको रूपमा तीक्ष्ण किनारका वस्तुहरू प्रयोग गर्न कडाइका साथ निषेध गरिएको छ।
फोटो: आइटम नम्बर। YR-GLY001
Ten. सुरक्षा दोहन र सुरक्षा बुलेटको उपयोग र मर्मतका लागि दश निर्देशन
(१) सुरक्षा दोहनको भूमिकालाई वैचारिक रूपमा जोड दिनुपर्दछ। अनगिन्ती उदाहरणहरूले प्रमाणित गरे कि सेफ्टी बलेट "जीवन बचाउने बेल्ट" हुन्। जहाँसम्म, केहि व्यक्तिहरू सुरक्षा दोहोर्याउन समस्याग्रस्त पाउँदछन् र विशेष गरेर केही साना र अस्थायी कार्यहरूको लागि माथि र तल हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ, र सोच्दछन् कि "सुरक्षा कार्यको लागि समय र काम सबै भइसकेका छन्।" सबैलाई थाहा छ, दुर्घटना एक पल मा भयो, त्यसैले सुरक्षा बेल्ट नियमहरु अनुसार हाइटहरु मा काम गर्दा लगाउनु पर्छ।
(२) प्रयोग गर्नु अघि सबै भागहरू अटुट छन् कि छैनन् जाँच गर्नुहोस्।
()) यदि उच्च स्थानहरूको लागि कुनै निश्चित हे hanging्गिंग स्थान छैन भने, उचित शक्तिको स्टील तार डोरीहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ वा झुण्ड्याउन अन्य विधिहरू अपनाउनु पर्नेछ। यसलाई सार्दा वा तीखो कुनामा वा ढीला वस्तुहरूको साथ ह्या hang्ग गर्न निषेध गरिएको छ।
())। उच्च पर्नुहोस् र कम प्रयोग गर्नुहोस्। सुरक्षा डोरीलाई उच्च स्थानमा पर्खनुहोस्, र तल काम गरिरहेका मानिसहरूलाई उच्च-ह्या hanging्गिंग कम प्रयोग भनिन्छ। यसले वास्तविक प्रभाव दूरीलाई कम गर्न सक्दछ जब झर्ने क्रममा हुन्छ, यसको विपरितमा यो कम लटका र उच्चको लागि प्रयोग गरिन्छ। किनभने जब झर्ने हुन्छ, वास्तविक प्रभाव दूरी बढ्दछ, र व्यक्ति र डोरीहरू ठूलो प्रभाव लोडको अधीनमा हुनेछन्, त्यसैले सुरक्षा दोहन उच्च त्रिशंकित हुनुपर्दछ र कम प्रयोग गरी रोक्न कम प्रयोग गर्नुपर्दछ।
()) सुरक्षा डोरी दृढ सदस्य वा वस्तुमा बाँध्नुपर्दछ, स्विing वा टक्कर रोक्नको लागि डोरी बुन्काउन सकिदैन, र हुकलाई जोड्ने औठीमा झुन्ड्याउनु पर्छ।
(6.. डोरी बिग्रनुबाट रोक्न सुरक्षा बेल्ट रोप सुरक्षात्मक आवरण अक्षुण्ण राख्नु पर्छ। यदि सुरक्षा कभर बिग्रिएको वा बिग्रिएको भेट्टाइन्छ भने, नयाँ कभर प्रयोग गर्नु अघि थप्नु पर्छ।
())। प्राधिकरण बिना सुरक्षा दोहन विस्तार गर्न र प्रयोग गर्न कडाइका साथ प्रतिबन्धित छ। यदि m मीटर र माथिको लामो डोरी प्रयोग गरिएको छ भने, बफर थप्न आवश्यक छ, र कम्पोनेन्टहरू मनमाना हटाउनु हुँदैन।
()) सुरक्षा बेल्ट प्रयोग गरेपछि, मर्मत र भण्डारणमा ध्यान दिनुहोस्। सिलाई भाग र सुरक्षा दोहोरिने भागको बारम्बार जाँच्न, यो घुमाइएको धागो बिग्रिएको वा बिग्रिएको छ कि छैन भनेर विस्तृत रूपमा जाँच गर्नु आवश्यक छ।
())। जब सुरक्षा दोहन प्रयोगमा छैन, यो राम्रोसँग राख्नु पर्छ। यो उच्च तापमान, खुला लौ, मजबूत एसिड, मजबूत क्षार वा तीखा वस्तुहरूको संपर्कमा पर्नुहुँदैन, र नम गोदाममा भण्डारण गर्नु हुँदैन।
(१०) सुरक्षा बेल्टको प्रयोगको दुई बर्ष पछि एक पटक जाँच गरिनु पर्छ। बारम्बार दृश्य निरीक्षण लगातार प्रयोगको लागि गरिनु पर्छ, र असामान्यताहरू तुरून्त बदल्नु पर्छ। सुरक्षा वा नमूना परीक्षणमा प्रयोग गरीएको सुरक्षा दोहोर्याउन प्रयोग गर्न जारी छैन।